Musharax Xasan Maxamed Nuur Qalaad oo Cadaado lagu soo dhaweeyay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Musharax Xasan Maxamed Nuur Qalaad oo Cadaado lagu soo dhaweeyay “Sawirro”
Wafdigani uu hogaaminayay musharaxa xilka madaxweynanimo ee Mudug iyo Galgaduud Xasan Maxamed Nuur Qalaad iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahano ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee xarunta Maamulka Ximan iyo Xeeb, halkaasi oo qeybaha bulshadu ay munaasabad soo dhaweyn ah ugu sameeyeen.
Nabadoon Maxamed Cumar Jimcaale Saylici oo ka mid ahaa wafdiga Musharax Qalaad ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay, waxaana uu ka codsaday bulshada Cadaado inay taageeraan musharaxa maanta ay wadaan.
Musharax Xasan Maxamed Nuur Qalaad oo isna hadlay ayaa soo dhaweeyay sida magaalada Cadaado loogu soo dhaweeyay isagoo sheegay in la joogo waqtigii ay midoobi lahaayeen gobolada Mudug iyo Galgaduud, isaguna uu ka mid yahay musharixiinta xilkaas u baratamaya, islamarkaana in badan oo ka mid ah bulshada labada gobol uu taageero ka heysto.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdi Maxamed Suldaan Axmed-nuur oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in musharax walba iyo martida imaaneysa ay soo wada dhaweynaayaan.
Xasan Maxamed Nuur Qalaad ayaa ah musharixii 3-aad ee Cadaado tagay muddo 30-cisho ka yar, iyadoo magaalada ay ka jiraan mashquul dhanka siyaasada maadaama ay ku qul qulayaan wufuud kale duwan.
Ciidamada Nabad Sugida Qaranka Oo Howlgalo iyo Tabarucaad Ay U Sameynayeen Dadka Ka Sameeyay Degmooyinka Hiliwaa Iyo Yaaqshiid
Equatorial Guinea Iyo Gongo Oo Barbardhac ku Kala Baxay Kulanka Furitaanka ee Koobka Qaramada Afrika